Chrome 88 inobvisa Flash Player uye inosuma izvi zvimwe zvinhu zvitsva | Linux Vakapindwa muropa
Chrome 88 inobvisa Flash Player uye inova yega sarudzo kana iwe uchida kushandisa kuwiriranisa
Pazuva rekutanga reiyi 2021, Diego akanyora chinyorwa nezve chiitiko chinozivikanwa uye chinotarisirwa kwemakore matatu: kufa kweflash player. Adobe yakadonhedza rutsigiro muna Zvita, uye ikozvino ndiwo mabhurawuza ari kuibvisa pazvinhu zvayo. Firefox ichazviita Chipiri chinotevera, uye maawa mashoma apfuura, Chrome 88 asvika senge yekutanga vhezheni yekumira kutsigira tekinoroji iyo yakatipa nguva dzakanaka, asi yakagara isina kuchengetedzeka.
Kubvisa Flash padivi, ichi hachisi chimwe cheyakavhurwa neGoogle mumwedzi yapfuura. Iwe watora mukana wekuita kuti ive yakachengeteka, kusanganisira Makumi mana nematatu ezvokuchengetedza. Pazasi iwe une runyorwa rwemashoko akatanhamara akasvika neChannel 88, pakati payo isu tatova kuti haisisina kutsigirwa kune OS X 10.10 Yosemite.
Chrome 88 inosimbisa
Kudonhedza rutsigiro rweFlash Player.
Hunhu hwekanangwa = »_ isina chinhu» ikozvino zvinoreva rel = »noopener» nekumisikidza nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza.
Tsigiro yeCSS factor ratio pfuma, pamwe neiyo "hyphens: auto" maitiro.
Kugadziridzwa kwakasiyana siyana muWebXR.
Tsigiro yeFTP yabviswa.
Kutsigira kwaYosemite kwakadonha, sisitimu yekushandisa yakaburitswa muna 2014.
Yakavandudzwa rima theme mukati Windows 10.
Basa rekutsvaga matabhu (Ctrl + Shift + A). Basa racho rakaremara nekutadza, asi isu tinogona kurishandisa kana tikarigonesa kubva chrome: // mireza / # inogonesa-tab-yekutsvaga.
Yakagadziriswa makumi matanhatu neshanu mabhagi.
Kwete nyowani ku / ye Chrome 88, asi zvakakosha kutaura: mamwe maAPI haachashanda mune mamwe mabhurawuza, seChromium.
Google Chrome 88 ikozvino iripo kubva website yepamutemo, uye zvakare kune akawanda masisitimu anoshanda, nekuti, semuenzaniso muUbuntu uye zvigadzirwa, iyo projekiti repository inowedzerwa otomatiki mushure mekumisikidzwa kweiyo browser. Mune masisitimu akaita seManjaro, iri mumahofisi epamutemo uye iyo yekuvandudza yasvikawo. Kana izvo zvisati zvichiratidzika mukugovera kwako, shivirira; Ichaita saizvozvo mumaawa mashoma anotevera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Chrome 88 inobvisa Flash Player uye inova yega sarudzo kana iwe uchida kushandisa kuwiriranisa